Outook Customer Manager: A Free Kpọtụrụ Manager App maka Office 365 Business Premium | Martech Zone
Otu onye ọrụ ibe m na-ajụ ihe na-adịghị ọnụ onye njikwa mmekọrịta ndị ahịa ọ ga-eji maka obere azụmaahịa ya. Ajụjụ mbụ m laghachiri bụ ụlọ ọrụ na ebe ikpo okwu email ọ na-eji na-ekwurịta okwu na atụmanya ya na ndị ahịa ya na nzaghachi bụ Office 365 na Outlook. Njikọ email bụ isi ihe ọ bụla CRM mmejuputa (otu n'ime ọtụtụ ihe), yabụ ịghọta ihe nyiwe a na-eji na ụlọ ọrụ dị mkpa iji belata ngwaahịa nke ị nwalere na / ma ọ bụ zụta.
Ọtụtụ mmadụ amataghị ya, mana Office 365 Business Premium Subscription nwere mgbakwunye mgbakwunye maka Outlook, akpọrọ Onye ahịa ahịa Outlook. Nke a bụ nkọwa nke ikpo okwu:
Onye njikwa ahịa ndị ahịa Outlook na-ahazi ozi na akpaghị aka, gụnyere ozi ịntanetị, nzukọ, oku, ndetu, ihe aga-eme, azụmahịa na oge a kara aka n'otu ebe. Icheta oge na a n'otu ndepụta gị kasị mkpa na kọntaktị na amụọ-enyere aka iji hụ na ihe dị mkpa bụ nke uche. You nwere ike ịkekọrịta ozi ndị ahịa na ndị otu gị ka ndị ahịa nwee ahụmịhe na-agbanwe agbanwe n'agbanyeghị onye ha na ha na-ekwurịta okwu.
Na njikwa ndị ahịa Outlook, ịkwesighi ịwụnye sọftụwia ọhụrụ ma ọ bụ jiri ụbọchị ụfọdụ zụọ ndị otu gị. Ma n'ihi na data gị nọ na Office 365, ị gaghị egbusi oge bara uru ịtọlite ​​njikọta na ngwanrọ ma ọ bụ ọrụ ndị ọzọ ma ọ bụ ijikwa ngwaahịa dị iche.
Ngwa ngwa ahịa ndị ahịa nke Outlook maka iOS na-enye gị ohere ịnweta ozi ndị ahịa mgbe ị na-aga ma ọ bụ chọọ ijide ozi ọhụrụ ngwa ngwa.
Ndị ụlọ ọrụ nwere ike iji Ego Microsoft iji duru ndị na-eduga na ngwa na weebụsaịtị gaa na Njikwa kọntaktị Outlook.
Download Outlook Contact Manager maka iOS
Tags: kọntaktị njikwaCRMnjikwa ahịamicrosoftMicrosoft MicrosoftOffice 365echiche crmnjikwa ọrụ njikwa ahịaobere azụmahịa crm